ओलीले सिटौलालाई सोधे यस्तो प्रश्न (भिडियोसहित) - BirtaJyoti
ओलीले सिटौलालाई सोधे यस्तो प्रश्न (भिडियोसहित)
adminNovember 30, 2017 12:00 am 0
बिर्तामोड । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली केही दिनयता चुनावी आमसभाहरुमा बोल्दा नेपाली कांग्रेसलाई मात्रै गाली गरिरहेका छन् । यस्तै गाली वर्षियो, बिहीबार पनि । ओलीले एमालेले कांग्रेसलाई लतारेर, घिसारेर ल्याएर संविधान जारी गर्न लगाएको बताएका छन् ।
बिहीबार झापाको क्षेत्र नम्बर २ अन्तर्गत बिर्तामोडमा आयोजित आमसभामा बोल्दै ओलीले भने, ‘हामीले संविधान कसरी बनायौँ, त्यो कुरा देशले देख्या छ ।
यही जिल्लाका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई मेरो प्रश्न छ, कांग्रेसलाई हामीले घिसारेर, लतारेर ल्याएर संविधानमा सही गर्न लगाएको हो कि होइन ? तपाईंलाई त थाहा छ नि ?’ यद्यपि, कांग्रेसले आफूलाई संविधानको जनक ठान्ने गरेको ओलीले बताए ।
अध्यक्ष ओलीले मुलुकमा चुनाव हुन नदिन विभिन्न प्रयासहरु भएको दाबी गरे । विभिन्न क्षेत्रमा विष्फोट भइरहेका वमहरुलाई अध्यक्ष ओलीले पटाकाको संज्ञा दिए । एउटाका नाममा अर्कैले विष्फोट गराइरहेको उनले दाबी गरे ।
केही कुराले पनि नेपालको अग्रगामी अभियान नरोकिने ओलीको भनाइ थियो । मुलुकका केही व्यक्तिहरु अहिले पनि राजतन्त्र ब्यूँतिन्छ कि भन्ने सपना बोकिरहेको ओलीले बताए । ‘महादेवले सतिदेवीलाई काँधमा हालेर घुम्दा त ब्यूँझिनन्, फालेको राजतन्त्र अब कसरी ब्यूँझिनु ?’ ओलीको प्रश्न थियो ।
नेपालका कम्युनिष्टलाई कसैले हल्लाउन समेत नसक्ने ओलीले बताए । ०४८ र ०५६ मा कांग्रेसले बहुमत ल्याएर पनि केही गर्न नसकेको स्मरण गर्दै ओलीले भने, ‘एक हल हुँदैमा बाख्राका पाठाले जोत्न सक्दैनन्, गोरु–राँगा नै चाहिन्छ ।’ पाएको बहुमत कांग्रेसले खुरुखुरु दरवारमा बुझाएको ओलीले बताए ।
आफूहरुसँग विचार, नीति र संकल्प रहेको बताएका ओलीले दुनियाँका कुनै पनि शक्तिसँग ननिहुरिने दाबी गरे ।
वामपन्थी नेतृत्वमा देश अगाडि बढेको दाबी गर्दै ओलीले त्यसको नेतृत्व एमालेले गर्ने जिकिर गरे । कांग्रेसले जतिबेलै भ्रम फैलाएको भन्दै उनले देश विकास गर्ने एजेन्डा कांग्रेससँग नभएको दाबी गरे ।
कृषिको आधुनिकीकरण कांग्रेसले कहिल्यै नसुनेको बताउँदै ओलीले औद्योगिकरण, पूँजीको परिचालन र शेयर बजार भनेको के हो, त्यसको परिभाषासमेत कांग्रेसलाई थाहा नभएको बताए ।
वामपन्थी गठबन्धनले चुनावपछि समाजवाद ल्याउँछ भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारी हेलिकप्टर लिएर दौडिरहेको ओलीले आरोपसमेत लगाए ।
‘सरकारी हेलिकप्टर लिएर प्रधानमन्त्रीज्यू कुद्या कुद्यै हुनुहुन्छ, कम्युनिष्ट सरकार आउने भयो, बर्बादै हुने भयो भन्दै हुनुहुन्छ उहाँ, कठैबरी !,’ ओलीले भने । कांग्रेस अब सरकारबाट हट्ने भयो भनेर प्रधानमन्त्री देउवाले कम्युनिष्टका नाममा भ्रम छर्दै हिँडेको ओलीले टिप्पणी गरे ।
देउवा नेतृत्वको सरकार नै कांग्रेसको अन्तिम सरकार भएको ओलीको दाबी छ । ‘मेरो झुट बोल्ने बानी छैन, कांग्रेसको यो अन्तिम सरकार हो, देउवाजी कांग्रेसको अन्तिम प्रधानमन्त्री हो,’ उनले भने ।
कांग्रेस अहिले पनि पहाड र तराई छुट्याउन लागिपरेको ओलीले बताए । कांग्रेसलाई देशका बारेमा सोच्ने फुर्सदसम्म नभएको ओलीको भनाइ थियो । कांग्रेसलाई जिब्रो नचपाइ बोल्न ओलीले आग्रहसमेत गरे । ‘कांग्रेसको नीति के हो ? बुझिने गरी भन्नुस् त प्रधानमन्त्रीज्यू !’ ओलीले प्रश्न गरे ।
झापामा राप्रपालाई कांग्रेसले धोका दिएकाले एमाले र माओवादी केन्द्रले साथ दिएको ओलीले स्पष्ट पारे । झापामा वाम गठबन्धनका सबै उम्मेदवारले जित्ने दाबी गर्दै अध्यक्ष ओलीले अनावश्यक हल्ला र समाचारका पछि नकुद्न आग्रह गरे । ‘एमालेले जे भन्छ, त्यो गर्छ, फोहोरी खेल खेल्दैन,’ उनले भने ।
कांग्रेसलाई देशका बारेमा सोच्नेसम्म फुर्सद नभएको उनको कथन थियो । ‘म प्रधानमन्त्री हुँदा ३ हप्तादेखि नाकाबन्दी थियो,’ ओलीले भने, ‘म प्रधानमन्त्री भएपछि स्वाभिमानका साथ वार्ता गरेर नाकाबन्दी खुलाएँ, नाकाबन्दी नखोलेसम्म भारत भ्रमणमै आउँदिनँ भनिदिएँ,’ ओलीले सुनाए । तर, पनि कांग्रेसले आफूलाई नेपाल–भारत सम्बन्ध बिगारेको आरोप लगाइरहेको ओलीले सुनाए ।
भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘हजुर हाम्रो संसद्ले संविधान संशोधन पास गर्न सकेन, अब हजुरहरुले मद्धत गर्नुप¥यो’ भनेर लज्जाजनक दृश्य देखाएको ओलीको भनाइ थियो ।
भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग गृहकार्य नगरेको विद्यार्थीले शिक्षकसँग बोलेझैँ देउवा प्रस्तुत भएको उनले टिप्पणी गरे ।
वाम गठबन्धनका सबै उम्मेदवारलाई विजयी गराउन आग्रह गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूले सबै उम्मेदवारहरुको जिम्मा लिने बताए । ‘विकास निर्माणको पनि जिम्मा मै लिन्छु, बजेटको चिन्ता लिनु पर्दैन,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा ओलीले वाम गठबन्धनबाट क्षेत्र नम्बर २ की प्रतिनिधिसभा सदस्यकी उम्मेदवार पवित्रा निरौला खरेल, क्षेत्र नम्बर २ (क) का उम्मेदवार एकराज कार्की र (ख) का उम्मेदवार वृख प्रधानलाई जितको शुभकामनासहित नेपालको राष्ट्रिय झन्डा प्रदान गरे ।
विभिन्न पार्टी परित्याग गरेकाहरुलाई एमालेमा स्वागत गरेका ओलीले झापा क्षेत्र नम्बर २ का वाम गठबन्धनका उम्मेदवारहरुको प्रतिबद्धतापत्र समेत सार्वजनिक गरे । विजयी उत्सवमा भेट्ने बाचा गर्दै उनी मञ्चबाट विदा भए ।
‘राप्रपालाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउन लिङ्देनलाई समर्थन’
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राप्रपालाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउन वाम गठबन्धनले राजेन्द्र लिङ्देनलाई उम्मेद्वारमा समर्थन गरेको बताएका छन् ।
चुनावीसभा अन्तर्गत वाम राष्ट्रवादी निर्वाचन परिचालन समिति झापा क्षेत्र नम्बर–३ ले भद्रपुरमा आयोजना गरेको बृहद् सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रियताको सवालमा वाम गठबन्धनको नजिक रहेको राप्रपाविरुद्ध देशीविदेशी षड्यन्त्र भएकाले त्यसलाई चिरेर बचाउन समर्थन गरेको बताएका हुन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले नेपालको सम्बृद्धिका लागि बाम गठबन्धन एक मात्र विकल्पका रुपमा आएको भन्दै एमालेले जे बोल्छ त्यो गर्ने ठोकुवा गरे । उनले फुटबल खेलमा जस्तो म्याच फिक्सिङ राजनीतिमा नहुने भन्दै आफ्नो पार्टीले समर्थन गरेको राप्रपाको गाई चिन्हमा मतदान गर्न कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन समेत दिए ।
बोलीले राम्रो हुँदैमा वा अनुहारले शालीन देखिँदैमा कसैले कसैप्रति सहानुभूति राखेर पार्टीको नीति विपरित जानु नहुने तर्क गर्दै ओलीले जातीय संकुचनमा लाग्दा देश संकटमा पर्ने उल्लेख गरे । उनले सम्बृद्धिको बाटो नदेख्ने कांग्रेस वाम गठबन्धनबाट लोकतन्त्र समाप्त हुने भ्रम छरेर डुलिरहेको आरोप लगाए ।
कार्यक्रममा वाम गठबनधनका झापा क्षेत्र नम्वर १ का उम्मेद्वार सुरेन्द्रकुमार कार्कीले स्वाभिमान सहितको सम्बृद्धिका लागि वाम गठबनधन आजको आवश्यकता रहेको जनाएका थिए भने वाम राष्ट्रवादी गठबन्धनका उम्मेदवार राजेन्द्र लिङ्देनले इमान र निष्ठाको राजनीतिका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे ।
नमूना बन्यो कन्काई सिँचाई
admin- January 1, 2018
लक्ष्मी काफ्ले/झापा पर्याप्त सिँचाईको व्यवस्था हुँदा पनि झापाका किसान हिउँदे बाली लगाउन मन गर्दैनन् । सिँचाई सुविधा भएर पनि झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका, कमल गाउँपालिका, शिवसताक्षी ... Read More
झापाली पत्रकारलाई युएईमा अवार्ड
युएई । नेपाल पत्रकार महसंघ युएई शाखाले बर्से्नि प्रदान गर्दै आएको उत्कृष्ट पत्राचार अवार्ड यस वर्ष रामप्रसाद ढंगेललाई प्रदान गरेको छ । महासंघको दशौं वार्षिकोत्सवको ... Read More
अर्बको सम्पति दान गर्नेका सन्तान सुकुम्बासी
बिर्तामोड । बिर्ताबजारबाट दक्षिण–पश्चिममा डोमालाल राजवंशीले देवीगुठीलाई दान दिएको जग्गाको मूल्य अहिले झण्डै एक अर्ब पुगेको छ । तर, उनै डोमालालका सन्तान भने सुकुम्बासी बनेका छन् ... Read More
NEWER POSTसेफ्टी ट्याङ्कीमा डुबेर एक जनाको मृत्यु
OLDER POSTमतदातालाई ल्वाङ सुकुमेल बाँड्दै बसाइँ सर्नेलाई हराउँछु : अधिकारी
खनाल चढेको गाडी नजिकै बम विस्फोट
युवतीलाई गुप्ताङ्ग देखाउनेदेखि महिलाका भित्री वस्त्र चोर्नेसम्मको यस्तो छ झापाका घटना